विमान दुर्घटनामा किन बचाउन सकिएन धेरै यात्रु ? – Nepal Journal
विमान दुर्घटनामा किन बचाउन सकिएन धेरै यात्रु ?
Posted By: Nepal Journal March 13, 2018 | २९ फाल्गुन २०७४, मंगलवार ०७:५१
विमानस्थलभित्रै भएको दुर्घटनामा पनि धेरै ४९ यात्रुले ज्यान गुमाए । सामान्यतया विमानस्थलभित्र आकस्मिक अवस्थामा उद्धारका लागि सबै उपकरण र जनशक्ति तयारी अवस्थामा हुन्छन् ।
विमानस्थलका प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुरका अनुसार चालकले इमर्जेन्सी घोषणा नगरेका कारण ‘ग्राउन्ड’मा रहेका दमकल र एम्बुलेन्सलाई तत्काल परिचालन गर्न सकिएन ।
जहाज दुर्घटनास्थलनजिकै नेपाली सेनाको उद्धार टोली रहेकाले दमकलले दुर्घटनालगत्तै आगो निभाउन थाले पनि एम्बुलेन्स भने करिब १० मिनेटपछि पुगेका थिए ।
पौडेलको नमस्ते ट्राभल कम्पनी नै युएस–बंगला एयरलाइन्सको जनरल सेल्स एजेन्ट (जिएसए) थियो । तर, नेपालमा युएस–बंगला भित्राउने पौडेलले सोही जहाज दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनुपर्‍यो ।
‘जसले युएस–बंगला नेपालमा ल्याए, उनै सोही विमान दुर्घटनामा बिते,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य तथा पौडेलका साथी भरतराज आचार्यले भने । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
Be the first to comment on "विमान दुर्घटनामा किन बचाउन सकिएन धेरै यात्रु ?"